Madaxweynihii hore ee Koonfur oo isu dhiibay Booliiska – Radio Daljir
Luulyo 8, 2021 6:22 b 0
“Madaxweyne Zuma wuxuu go’aansaday inuu u hogaansamo amarka xiritaanka,” ayaa lagu yiri qoraalkiisa oo kooban.
Gabadhiisa, Dudu Zuma-Sambudla, ayaa goor dambe ku qortay Twitter-ka in aabaheed “uu ku sii jeedo (xabsiga) xaaladdiisuna ay aad u fiican tahay”.
Mr Zuma waxaa loo xukumay 15-bilood oo xarig ah 29-kii June kadib markii uu ka horyimid awaamiirtii la siiyay ee ahayd in uu cadeyn ka bixiyo baaritaanka musuqmaasuqa sagaalkii sano ee uu xukunka hayay.
Ganacsatada ayaa lagu eedeeyay inay shirqooleen siyaasiyiinta si ay saameyn ugu yeeshaan hanaanka go’aan qaadashada intii uu xafiiska joogay. Balse Mr Zuma wuxuu dhowr jeer ku celceliyay inuu dhibane u yahay shirqool siyaasadeed.
In kasta oo uu xisbigiisa ka saaray xafiiska 2018, African National Congress (ANC), haddana wuxuu heystaa koox daacad u ah taageerayaashiisa, gaar ahaan gobolka uu ka soo jeedo ee KwaZulu-Natal.
Taageerayaashiisa ayaa gurigiisa ku soo xoomay ka dib intii uusan is dhiibin Arbacadii.